Libaney Mandoro Saka Anaty Micro-Onde · Global Voices teny Malagasy
Libaney Mandoro Saka Anaty Micro-Onde
Voadika ny 11 Novambra 2013 3:05 GMT
Lehilahy Libaney nandoro saka tanaty micro-onde, raha naka sary izany toe-javatra izany ny namany. Nitsongo dia ireo nahavanon-doza ny bilaogera Joey Ayoub
Nalaza haingana tao anatin'ny fotoana fohy monja tamin'ny aterineto ny lahatsarin'ny tovolahy libaney iray nandoro tanaty micro-onde saka velona iray. Tsikaritra fa nampiditra saka tanaty micro-onde – ho fanalana azy – ny lehilahy iray raha naka sary izany ny iray hafa ary namoaka ny lahatsary tao amin'ny Facebook. Nametraka antso hamantarana ireo nahavanon-doza tao amin'ny bilaoginy i Joey Ayoub ary niezaka ny hitsongo dia ny iray amin'izy ireo:
Hita ho nisy nahamaizana kely ilay saka (antenaina) saingy tsy maty. Hanaisotra ny lahatsary aho rehefa hita ilay saka. Ny antony tokana hamoahako ity lahatsary ity dia eo am-pikarohana azy ny ONG hakàna ilay saka sy hanome ny fikarakarana sahaza azy.
Raha hitanao ny misy azy dia ampahafantaro anay.
Nanonona ny anaran'ireo namoa-doza i Ayoub tamin'ny filazana hoe:
Ry Mohammad Jallad and Hassan Hammoud, raha mamaky izao ianareo, iangaviana ianareo hanatitra ny saka any amin'ny fikambanana mpiahy ny biby tahaka ny BETA (70-248765) sy ny Bibin'i Libanona (01-751678). Mora ifandraisana izy roa tonta ireo ary hisy olona handray ny saka haingana araka izay tratrany. Eto tsy misy ny fanamarinan-tena azonareo atao tamin'izay nataonareo. Maharary, mampihoron-koditra ary tena diso tanteraka.
Soa ihany fa velona ihany ilay saka. Mampalahelo fa ho, raha tsy efa hita, tafaray amin'ireo jiolahy tsimifaditrovana indrindra, ny anaranareo. Miresaka ny fampifandraisana ny fahafinaretana azo tamin'ny fampijaliana biby sy izany fahafinaretana izany ihany rehefa mahita ny fijalian'olombelona. Tsy tena tsara izany.
Araka ny nolazain'i Ayoub, Hammoud no nampiditra anaty micro-onde ilay saka, raha naka an-tsarimihetsika izany kosa i Jallad.
Naneho hevitra ny mpamaky iray:
Tsy ilaina ny mijery ny lahatsary. Dingana lehibe hanajana ny zon'ny biby ny fanehoana ampahibemaso ny anaran'ny mpanimbazimba ny biby voalohany tahaka izao. Mila ny fanajanay, mpitia biby, ianareo rehetra!
Tezitra aoka izany ny mpiserasera ao amin'ny Twitter.
Nanamarika i Ahmad Yassine:
Nijery ny lahatsarin'ilay tovolahy nametraka ny sakany tao anaty micro-onde aho izay, manabe tanora jiolahy i Libanona, mila fitsaboana haingana araka izay tratra izy!
Farany, mihaika ny polisy i Philip Farra handray andraikitra:
Mihaika ny polisin'i Libanona aho hisambotra an'i Mohammad Jallad sy i Hassan Hammoud. Saka anaty micro-onde